ချောအိမာန် (မန္တလေး): မျဉ်းတစ်ကြောင်းပေါ်ကလူ
"ကဲ ဘာပြောဦးမလဲ၊ ဘယ်လိုရှင်းချင်သေးလဲ၊ ညည်းတို့လုပ်ပုံ မလွန်ဘူးလို့များ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်နေသေးလား၊ အံ့သြပါရဲ့၊ ညည်းတို့ တစ်ယောက်ကို သုံးသောင်းစီပေးထားတာ သိပ်ကို နည်းနေလို့လား၊ ဘာအလုပ်တွေများ ပင်ပင်ပန်းပန်း ငါ ခိုင်းနေလို့လဲ၊ တခြားအလုပ်တွေကိုတောင် လျှော့ပြီး ငါ့အဖေကို ပိုဂရုစိုက်စေချင်လို့ အဖေ့နားမှာ ထားတာ။ အဖေ့ကို အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးကအစ မှန်စေချင်လို့ နေ့စဉ်စာရင်းဇယားနဲ့ လုပ်ပေးထားတာ၊ ခု ငါ့အဖေ ဆေးရုံပြန်တက်ရတာ နင်တို့ကြောင့်၊ နင်တို့ ငါ့အဖေနား လင်အကြောင်း၊ ရည်းစားအကြောင်းတွေပဲ တွတ်ထိုးပြောနေကြတာ၊ ငါ့အဖေ ယိုင်နဲ့နဲ့ဖြစ်လာတာ နင်တို့ကြောင့်။ ပုံမှန်မကျွေး၊ ပုံမှန်ဆေးမတိုက်နဲ့၊ တိုက်တဲ့ဆေးတွေကတော့ နေ့တစ်လုံး ညတစ်လုံး ပုံမှန်ကုန်လို့၊ အဖေ့ဝမ်းထဲတော့ မရောက်ဘူး။ နင်တို့ တော်တော်လုပ်ရက်ကြပါလား။ ငါကတော့ နိုင်ငံခြားကနေ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး အဆင့်ဆင့်မှာရနဲ့။ ဟမ် နင်တို့ကတော့ တောက၊ ရွာက ကျန်ခဲ့တဲ့ အဖေ၊ အမေတွေကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့ ငါ့အဖေကို တိုက်မယ့်ဆေးတွေကို ခိုးခိုးပေးတာပေါ့ ဟုတ်လား။ နင်တို့ မိဘတွေကတော့ တောမှာ နိုင်ငံခြား ဆေးကောင်းတွေသောက်ပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်လို့ ငါ့အဖေကိုတော့ သေချင် သေပစေပေါ့ ဟုတ်လား၊ အေး နင်တို့နှစ်ကောင်လုံးကိုလည်း ကြည့်မရတာ ကြာပြီ၊ မနက်ဖြန်ပြန်ကြ၊ အထုပ်ကိုယ်စီ ထုပ်ထားကြ၊ ငါ့ အဖေရှိတဲ့ အခန်းထဲလည်း လုံးဝမဝင်ရဘူး၊ နင်တို့ အဝတ်အစားနဲ့ နင်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းပဲ ထည့်ကြားလား၊ မြမူနဲ့ ဟေမာ မနက်ဖြန်ကစပြီး အဖေ့အခန်းကို နင်တို့ဝင်တော့၊ နင်တို့ကို အစကစပြီး ပြန်သင်ပေးမယ်၊ ဒီလအတွက် ဈေးကြီးတဲ့ ငါ့အဖေဆေးတွေ ခိုးတဲ့အတွက် လစာအပြည့်မရဘူးမှတ်၊ သွား" ကျွန်မ ဒေါသဖြစ်လွန်းလို့ ကိုယ်တွေလက်တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတယ်။ မြမူကို ရေတစ်ခွက် ယူခိုင်းရင်း သောက်လိုက်ရတယ်။ မနက်ဖြန်ကစပြီး ဟေမာကို အဖေနဲ့ထားပြီး နပ်(စ်) တစ်ယောက် ငှားမယ်။ မြမူကတော့ ထမင်းဟင်းချက်။ သူလည်း ကျွမ်းလာပါပြီ။ ကျွန်မအိမ်မှာ မြမူနဲ့ဟေမာက အစောဆုံးရောက်တာ၊ နောက်တော့ ဥမ္မာထွေးနဲ့ နန်းသီရောက်လာတယ်။ သူတို့လေးယောက်က တစ်ရွာတည်း အရင်ကလည်း ရွာမှာ အလုပ်အတူတူလုပ်ခဲ့ကြသူတွေ။ လူလိုတော့ ဥမ္မာနဲ့နန်းသီတို့ ဟေမာတို့ အဆက်အသွယ်နဲ့ပဲ ခေါ်လိုက်တာ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အိမ်သန့်ရှင်းရေး အဝတ်လျှော်၊ သစ်ပင်ရေလောင်း၊ ခွေး အစာကျွေးပေါ့။ အဖေလည်း လေဖြတ်ပြီး အိပ်ရာထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲရော၊ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အဖေ့နားမှာ ကြီးကြပ်စေခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်က သူတို့အလုပ်တွေပါ လုပ်ရတော့ ဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့၊ ဟေမာနဲ့မြမူက ဘာမှ မပြောကြပါဘူး၊ လုပ်ဆို လုပ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ ဥမ္မာနဲ့ နန်းသီက အဖေ့နားရောက်သွားတော့ သက်သာသွားတာပေါ့။ နေကြာစေ့လေး စားလိုက်၊ စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်၊ အဖေ့အတွက် တရားခွေနားထောင်ရအောင် ပေးထားတဲ့ဟာကို သီချင်းခွေဖွင့်လိုက်နဲ့ ဒီလောက်တော့ မြင်ပေမယ့် သိပ်တော့ မပြောမိသေးဘူး။ အားနေရင်တောင် အရင် ကိုယ်လုပ်နေကျ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလေးတောင် လုပ်မပေးချင်ကြတော့ဘူး။ တစ်ရက်ကတော့ အဘိုးစားဖို့ Super market က ဝယ်လာတဲ့ ဂျယ်လီပူတင်းဘူးကို ရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်ပြီး အဘိုးကျွေးခါနီး သူ့ပါးစပ်ထဲ တစ်ဇွန်းမောက်မောက် ခပ်ထည့်လိုက်တာကို မြင်လိုက်တယ်။ ကျွန်မကို မြင်တော့ ပါးစပ်ပိတ်ရင်း တုံ့ခနဲဖြစ်သွားတဲ့ ဥမ္မာကို "နင့်ပါးစပ်ထဲကဟာတွေပြီးအောင်မျိုချလိုက်" လို့ပြောပြီး ဆူပြောပြီးမှ ရုန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ ထွက်လာခဲ့ပေမယ့် စိတ်ကမချ။ မြမူနဲ့ဟေမာကို မှာခဲ့ပေမယ့် သူတို့ကလည်း အဖေ့အခန်းထဲဝင်နေတာ မဟုတ်တော့ မမြင်နိုင်၊ အိမ်မှာက အစ်ကိုက နိုင်ငံခြားမှာ သူ့မိသားစုနဲ့ ကျွန်မနဲ့ဖေဖေ၊ နောက် ဖေဖေရဲ့ဆုံးသွားတဲ့ ညီရဲ့သမီးလေးက ခြောက်တန်း၊ မွေးစားထားတာ၊ နောက် သူတို့လေးယောက်၊ ဒါပဲ။ ဖူးဖူးလေးက ကျွန်မနဲ့အိပ်တယ်။ ရုံးမသွားခင် ကျောင်းပို့က လုပ်ရသေးတယ်။ မိဘနှစ်ယောက်လုံး မရှိတော့ဘဲ ခိုကိုးရာမဲ့ခဲ့တဲ့ ကလေးလေးကို အဖေရော ကျွန်မရော သနားခဲ့တယ်။ ဖေဖေရဲ့ ပင်စင်လစာ။ ကျွန်မရဲ့ လစာ။ ကိုကိုပို့တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ တစ်အိမ်လုံး လည်ပတ်နေရတာ၊ တစ်ခါတစ်ခါ ကျပ်သွားပေမယ့် ဖေဖေ့ကျန်းမာရေး အတွက်ကိုတော့ အရင်ကတည်းက ငွေစုစာအုပ်လုပ်ပြီး ဘဏ်ထဲမှာ သီးခြားထည့်ထားခဲ့တယ်။ အရင်က ဖေဖေက ဂျစ်လေးတစ်စီး ရှိတယ်။ ဆီထုတ်ထုတ်ပြီး ကျွန်မကို မုန့်ဖိုးပေးသေးတာ၊ အဲဒီ မုန့်ဖိုးကိုလည်း ဖေဖေ့ဘဏ်စာအုပ်လေးထဲပဲ ထည့်စုခဲ့တယ်။ ဖေဖေ့ကျန်းမာရေးအတွက် စုတဲ့ ငွေဆယ်သိန်းကျော်ကျော် ရခဲ့တယ်။ မနှစ်ကမှစပြီး ဖေဖေလေဖြတ်လို့ ဆေးရုံစတက်ရတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ တစ်ခါ ပြန်တက်ရတယ်။ ဘဏ်စာအုပ်လေးထဲက ငွေများစုရတာသာ ကြာခဲ့တာ၊ သုံးလိုက်ရတော့ ခဏလေးပဲ။ ခုတစ်ခေါက်ကတော့ ဖေဖေသတိ ကောင်းကောင်းမရတော့ဘူး။ အိပ်ရာပေါ်ပဲ အမြဲလှဲနေတော့တယ်။ အစားကလည်း နည်းနည်းပဲ။ အဓိက နိုင်ငံခြား အားဆေးကောင်းတွေကို ကိုကို့ဆီက မှာတိုက်ရတယ်။ အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက အဲဒီအားဆေးတွေနဲ့ ပြန်ထူထောင်လာတာဆိုတော့ အစာမစားတဲ့ ဖေဖေအတွက် ဆေးပဲအားကိုးရတယ်။ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် ဒီဆေးတွေက အစာစားချင်စိတ်ကိုလည်း ဖြစ်စေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခေါက် ဖေဖေ့ရဲ့ပုံစံက ထူးခြားမလာဘူး။ ခေါင်းပဲယမ်းနေတယ်။ ထမင်းကလည်း ဇွန်းသေးနဲ့ သုံးဇွန်းလောက်ပဲ။ ကျန်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေတော့ သောက်တယ် ပြောတာပဲ။ ဒါနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲက စပရိုက်ဘူးကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ဘူးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ကျော်တောင် လျော့နေတယ်။ ဒါဆို ဖေဖေ တော်တော်သောက်တာပဲဆိုပြီး ဝမ်းသာသွားသလို ဖြစ်ပေမယ့် ချက်ချင်းမယုံသလို ဖြစ်သွားတယ်။ ပူတင်းတောင် ခိုးစားသေးတာ။ ဒီအရည်လည်း သူတို့မသောက်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဖေဖေက ဘာမြင်တာမှတ်လို့၊ သူ့ဘာသာသူ အိပ်နေတာ၊ မယုံပေမယ့် မပြောသေးဘူး။ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ညနေကျ ဖူးဖူး စပရိုက်သံဘူးလေး ဝယ်လာတယ်။ ဖူးဖူးက ဘိုးဘိုးကြီး သောက်မှာလားဆိုပြီး ပါးစပ်နား တေ့ပေးတယ်။ ဖေဖေက တော်ပြီ သူမကြိုက်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက ဖေဖေကြိုက်တယ်လေ။ ဖေဖေသောက်တဲ့ ဒီအရည်နဲ့တူတူပဲဆိုပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲက ဘူးကြီးယူပြတော့ ဖေဖေက မျက်လုံးလေးကို ရှုံ့ကြည့်ရင်း "ဖေဖေ မသောက်ဘူး သမီး" တဲ့။ ကျွန်မ သိလိုက်သလို ဟိုနှစ်ကောင်လည်း မျက်နှာပျက်ပြီး တောင်လုပ်တာလိုလို၊ မြောက်လုပ်တာလိုလိုနဲ့… "အေး အဖေ မသောက်ဘဲနဲ့ ဘာလို့ လိမ်ပြောတာလဲ" "အဘိုးက သောက်မယ်ပြောလို့ ဖန်ခွက်ထဲထည့်တာ မသောက်ဘူးဆိုတော့ ပြန်ထည့်ရခက်သွားလို့" "သြော် ဒီပုလင်းထဲကို ဒီဖန်ခွက်ထဲက ဒီအရည်ကို ဒီလိုဝင်အောင် ထည့်ရတာ ခက်သလား၊ နင်တို့နော်၊ ငါ့ပါးစပ်နဲ့ တွေ့တော့မယ်" "သမီးရယ် သူတို့သောက်ချင်လို့နေမှာပေါ့" ဖေဖေက ဖော့ဖော့ဖေးဖေး ဝင်ပြောတယ်။ "သောက်လို့ရတယ်၊ ဖေဖေ မသောက်တာကို ဖေဖေသောက်တာလို့ ညာပြောတာကို မကြိုက်တာ၊ သမီးက ဆရာဝန်လာရင် ဖေဖေ ဘာစားတယ်၊ ဘာသောက်တယ်၊ ဆီး ဘယ်လောက်သွားတယ် ဆိုတာကစ မှတ်ပြီး ပြောရတာလေ။ သူတို့က အမှားတွေမှတ်တော့ အမှားတွေ ပြောမိတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ။ နင်တို့နှစ်ယောက် သေချာသတိထားနေ ကြားလား" "ဟုတ်ကဲ့" "ပြောရင် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့၊ နင်တို့တောမှာ ဒီလိုစပရိုက်မပြောနဲ့ ရေတောင် ရေကြည်သောက်ရရဲ့လား၊ နင်တို့လေးယောက်လုံးကို ဝယ်ကျွေးသင့်တဲ့ဟာ မှန်သမျှ ငါ ဝယ်ကျွေးတယ်။ ဒါတင် မဟုတ်ဘူး။ နင်တို့ လစာအသားတင်၊ တီဗီကလာသမျှ Lotion တွေ၊ မိတ်ကပ်တွေ နင်တို့ ဝယ်လိမ်းနိုင်ကြတယ်။ နင်တို့ ပိုက်ဆံနဲ့မို့ ငါ ဘာမှမပြောပါဘူး။ အေး လွန်ကဲပြီး ငါ့ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးကို ခိုးထားတာ လစ်ရင်လစ်သလို ငါ့ရဲ့ ရေချိုးဆပ်ပြာကို ယူသုံးတာတွေ မသိဘူး ထင်လို့လား၊ နင်တို့ ရေချိုးခန်းထဲ ထွက်လာရင် အနံ့တွေ ထောင်းထောင်းထနေတာ၊ ဒီအိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေ ပေါပေမယ့် ဘယ်နား ဘယ်ပစ္စည်း ငါ အကုန်မှတ်မိတယ်။ နင်တို့ ဆပ်ပြာ အသုံးအဆောင်တွေ သီးသန့်ရှိပြီးသား။ ခု နင်တို့နှစ်ယောက်လုံး ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီဆို မြန်မာပြည်က အပေါစား ထင်မနေနဲ့၊ ငါ့အစ်ကိုနဲ့ ယောင်းမက ပေးထားတာ၊ မတော်တော့လို့ နင်တို့ကို အသစ်အတိုင်းပဲ ပေးထားတာ၊ ငါ ဖူးဖူး အတွက် ချန်ထားရင် ရသားပဲ၊ နိုင်ငံခြားဖြစ်စစ်စစ်တွေ ခါးပေါ်တင်၊ ခေါင်းပေါ်တင်ကြပြီး မြန်မာပီသရမယ့် စေတနာစစ်စစ်တွေက ဘယ်ရောက်သွားပြီတုံး၊ ဟို နှစ်ယောက်ဆို နင်တို့နှစ်ယောက်ထက် ပင်ပန်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘာအတွန့်တက်တာမှ မရှိဘူး။ နင်တို့မှာ ခု ရေပေါ်ဆီတွေလို ဖြစ်နေပြီ၊ ကဲ ဖေဖေ အိပ်တော့ နားငြီးနေဦးမယ်၊ ဖေဖေ အနားယူနေတုန်း တစ်ယောက်က ကြမ်းတိုက်၊ တစ်ယောက်က ခြံထဲကအပင်တွေ အကုန်ရေလောင်း" နှစ်ယောက်သား မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်တွေလို ကုပ်ကုပ်နဲ့ ထွက်သွားကြတယ်။ ပြောရတာလည်း မောတယ်။ အဖေ့နားစောင့်ရလို့သာပဲ ရေချိုးပြီး အလှဆင်နေတာ မပြီးတော့ဘူး။ ဒါမျိုးတွေဆိုတာ အရင်ကတည်းက ဖေဖေ့ဖို့ ထမင်းနဲ့ဟင်း စီမံပေးရတာကိုက စပယ်ရှယ်ပဲ။ ဖေဖေ့ကို စားစေချင်တာကိုး၊ ငါးလေးတစ်မျိုး၊ ကြက်လေးတစ်မျိုးနဲ့ ဟင်းချိုလေးအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖေဖေကျန်သမျှ မီးဖိုချောင်ထဲ မရောက်ဘူး။ အခန်းထဲတင်ကုန်တာ။ ကိုကိုက ဖေဖေအားရှိအောင် စားနိုင်တာလေး မုန့်တွေ အမျိုးမျိုး ပို့ပေးတယ်။ ဖေဖေက စားလှမှ ဘယ်လောက်စားနိုင်မှာတုံး။ လချီစားရမယ့်ဟာတွေလည်း ရက်နှစ်ဆယ်လောက်နဲ့ ကုန်လိုကုန်နဲ့၊ အဘိုးက သိပ်ကြိုက်တာပဲဆိုတာ ပါးစပ်က မချဘူး။ ဒီအထိကို ကျွန်မခွင့်လွှတ်ပေးလို့ ရသေးတယ်။ နောက် ဒီလို မလုပ်အောင် ပြောလို့ရသေးတယ်။ အရင်တစ်ပတ်က ဖေဖေ့ကျန်းမာရေးဖောက်လို့ ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်။ ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်က တိုက်တဲ့ဆေးတွေ မေးတယ်၊ ဆရာဝန်က တိုက်တဲ့ ဆေးတွေ အားလုံးခဏရပ်ထားပေပါ။ ဆေးပြောင်းတိုက်မယ်ဆိုပြီး ဆေးအသစ်တွေ ပေးတယ်။ ဖေဖေ ဆေးရုံတက်ရတဲ့ သုံးပတ်ကျော်ကျော်မှာ အိမ်က ဘာဆေးမှ မသောက်ရဘူး။ ကျွန်မ ဖေဖေရဲ့ ဆေးတွေကြည့်တော့ အားဆေးတွေ ကယ်စီယမ်အရိုးအားကောင်းစေတဲ့ ဆေးတွေက လျော့နေတယ်။ သိသိသာသာပဲ၊ ဆေးဆိုတော့ စိတ်ထဲ မထင်ထားမိတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ သတိရမိတာတွေကို ပြန်စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုက သူတို့ အိမ်တွေအတွက် ဘာလေးပို့ချင်လို့ပါ၊ ညာလေးပို့ချင်လို့ပါဆိုပြီး နှစ်လတစ်ခါလောက် ပို့ကြတယ်။ ပို့တိုင်းလည်း အခန်းထဲက ထွက်လာရင် ပါကင်က ထုပ်ပြီးသား၊ ဘာတွေလဲလို့ မေးရင် ပုဇွန်ခြောက်၊ ဒါမှမဟုတ် အင်္ကျီအဟောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် တဘက်၊ စာအုပ်နဲ့ အမျိုးမျိုးပဲ၊ ကျွန်မလည်း တစ်ခါမှတော့ ဖောက်စစ်တဲ့အလုပ်ကို မလုပ်မိဘူး။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မဖြစ်တော့၊ သူတို့ ပို့မယ်ဆိုတဲ့ ပြောသံကြားနေရတယ်။ ထင်တာ မမှားဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့အိမ်တွေအတွက် ဖေဖေ့အားဆေးတွေကို ဝေပုံကျခွဲဝေပြီး ပို့နေနိုင်တယ်။ မဟုတ်ရင် သူတို့သောက်မလား၊ ဒီလောက် အားကောင်းမောင်းသန် ကောင်မနှစ်ကောင်လုံး ဆေးသောက်ရမှာ ကြောက်တယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီကိစ္စကို ဖမ်းမှဖြစ်မယ်။ ကျွန်မ ရုံးမသွားဘဲ ခွင့်ယူထားတဲ့ တစ်ရက်မှာ ထမင်းစားခန်းမှာ ကျွန်မကို တွေ့တော့ နန်းသီက အံ့သြသွားတယ်။ "မမ ဒီနေ့ ရုံးမသွားဘူးလား" "အေး မသွားဘူး" "နင်တို့ ဘယ်သွားမလို့လဲ၊ လက်ထဲမှာ အထုပ်နဲ့" "ဟို အမေတို့ဆီ ပို့မလို့ပါ" "သြော် ဒီတစ်ခေါက် ဘာတွေလဲ၊ တော်တော်ပို့ရတယ်နော်၊ နင်တို့ မိဘတွေက ဝမ်းသာမှာပဲ" "ကျွန်မ ပါတိတ် အဟောင်း တစ်ထည်နဲ့ အမေမှာတဲ့ ဘုရားစာအုပ်ပါ" ဥမ္မာကလည်း အခန်းထဲက ထွက်လာတာ အထုပ်ကိုင်လျက်မို့ တန်းမိသွားတယ်။ ပြန်ဝင်လို့လည်း မရဆိုတော့ ကျွန်မတို့နား ရောက်လာတယ်။ "ဥမ္မာရော ပစ္စည်းပို့မလို့လား" "ဟုတ် အစ်မ ကျွန်မ မောင်လေးအတွက် ကျောင်းစိမ်းအင်္ကျီပါ" "သြော် နင်တို့ သွားပို့မနေနဲ့တော့၊ နေ့လယ်စာစားချိန်လည်း နီးနေတော့၊ ငါလည်း စာတိုက်သွားမှာ ပေးခဲ့မယ်" စာတိုက်က ကျွန်မတို့ လမ်းထိပ်တင်ဆိုတော့ အရင်က သူတို့နှစ်ယောက် ခြေလျင်လျှောက်ပြီး သွားပို့နေကျ။ ဒီနေ့တော့ မတိမ်းမယိမ်း အထုပ်ကိုယ်စီနဲ့ နှစ်ထုပ်လုံး ကျွန်မရှေ့မှာ၊ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် လှမ်းကြည့်လိုက်တာ တွေ့ရတယ်။ ထွက်သွားမလို့ လုပ်နေတုန်း၊ ကျွန်မက နန်းသီကို အံဆွဲထဲက ကတ်ကြေးယူခိုင်းလိုက်တယ်။ နန်းသီက ခပ်လေးလေးခြေလှမ်းတွေနဲ့ ကျွန်မကို ကတ်ကြေးလှမ်းပေးတယ်။ "နင်တို့ နှစ်ယောက်လုံး နေဦး" "နင်တို့တွေ ပစ္စည်းပို့တိုင်း ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မကြည့်ခဲ့ဘူး၊ နင်တို့ကို ယုံကြည်စိတ်ရှိခဲ့လို့ အခု ဒီအထုပ်နှစ်ခုလုံးကို နင်တို့ရှေ့ဖွင့်မယ်၊ ယုံကြည်စိတ် နည်းသွားလို့၊ ဒီအထဲမှာ ငါ လိုချင်တဲ့ အဖြေပါခဲ့ရင်တော့ နင်တို့ကံပဲ" ကျွန်မ နန်းသီအထုပ်ကို အရင်ဖောက်လိုက်တယ်။ ဘုရားစာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ထုပ်ထားတယ်။ ပါတိတ် ထဘီအဟောင်းတစ်ထည်၊ ကျွန်မပေးထားတဲ့ ပါတိတ်ထဘီပါပဲ၊ ထဘီကို ကိုင်လိုက်စဉ်မှာ အထဲမှာ ခပ်လုံးလုံးပုလင်းတစ်လုံး လျှောကျလာတယ်။ လိမ့်သွားတဲ့ ပုလင်းလေးကို ဖမ်းယူလိုက်ပြီး အဖုံးဖွင့်လိုက်စဉ်မှာ ဖေဖေရဲ့ အားဆေးတောင့်ညိုညိုတွေ ထွက်ကျလာတယ်။ ကျွန်မလက်ဝါးထဲက ဆေးတွေကိုပြရင်း နောက်တစ်ထုပ် ဆက်ဖောက်လိုက်တယ်။ သူတို့မျက်နှာတွေ ကြက်သေသေနေကြပြီ။ ရင်ခုန်သံတွေကိုတောင် အတိုင်းသား ကြားနေရသလိုပဲ။ သေချာပါပြီ ဥမ္မာ့အထုပ်မှာလည်း ကျွန်မ ခပ်သွက်သွက် ဖောက်လိုက်တယ်။ ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံလေးကြားက အထုပ်တစ်ထုပ် ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့တောင် သေချာထုပ်ပိုးထားလိုက်သေးတယ်။ အိတ်ကို ကတ်ကြေးနဲ့ ထိုးဖောက်လိုက်တယ်။ ဖေဖေ့ရဲ့ ဆေးတောင့်တွေ လက်ဝါးထဲ ရောက်လာတယ်၊ ရေလိုက်တော့ အလုံးသုံးဆယ်၊ တစ်မျိုး ဆယ့်ငါးလုံးစီ၊ နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့ ခြောက်ဆယ်။ ကဲ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ သူတို့ကို ပွဲမကြမ်းရင် ဘယ်တော့ကြမ်းမလဲ။ ကျွန်မ အဖေ လူမမာကြီး အားအင်ချည့်နဲ့နေတာ သင်းတို့ကြောင့်၊ နှစ်ယောက်သား မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျအောင် ဆူပစ်လိုက်တယ်။ ဒေါသကလည်း အစွမ်းကုန် ငယ်ထိပ်ထိ ထွက်သွားတာမို့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို မမြင်ချင်တော့ ခါတိုင်းလုပ်နေတာတွေကို လွှတ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေ ရှိပေမဲ့ ခုလို မလုပ်သင့်တဲ့ ပစ္စည်းကိုတောင် ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ သင်းတို့ကို ဘယ်လိုမှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်။ "နင်တို့ နှစ်ယောက်လုံး သိပ်တော်နေကြပါလား။ နင်တို့မိဘတွေကို သူများဆေးတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို ခိုးပေးရက်သလား၊ ကုသိုလ်ရမယ်လို့ရော ထင်သလား၊ ကြည့်စမ်း၊ နင်တို့ကို အားကိုးတကြီးနဲ့ နင်တို့လက်ထဲထားထားတဲ့ ငါ့အဖေ ပိန်လို့၊ လူမမာရုပ်ရည်နဲ့ နင်တို့ နည်းနည်းမှ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိဘူးလား၊ ကိုယ့်လိုဘအတွက်ပဲ ကြည့်ခဲ့တဲ့ နင်တို့အတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ကတော့ အလုပ်ဖြုတ်တယ် မနက်ဖြန်ပြန်၊ နင်တို့အခန်းထဲကို ငါကိုယ်တိုင် ရှာတော့မယ်၊ ဟေမာ" "ဟုတ်ကဲ့" မီးဖိုချောင်ထဲကနေ နားစွင့်နေတဲ့ ဟေမာ ပြေးထွက်လာတယ်။ "ဖေဖေ့ကို နေ့လယ်စာ ကျွေးလိုက်တော့၊ မြမူ ခေါ်လိုက်" "ဟုတ်ကဲ့" မြမူရောက်လာတော့ "မြမူ သူတို့အခန်းထဲ နင်နဲ့ဝင်မယ်၊ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အဝတ်တွေကို ထုတ်ပေးလိုက်၊ နင်တို့ တောနဲ့ပဲတန်တဲ့ဟာတွေ" မြမူနဲ့ ကျွန်မ သူတို့အခန်းထဲ ဝင်စစ်တော့ သိပ်ကြာကြာမစစ်လိုက်ရပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ ပဝေသဏီတုန်းက ပျောက်နေတဲ့ ခေါင်းစည်းကလစ်၊ လက်ကိုင်ပဝါသုံးထည်၊ မျက်နှာသစ်ဆေးဘူး၊ လက်သည်းနီ တစ်ဘူး၊ နှုတ်ခမ်းနီ နှစ်ဘူး၊ နမူနာ ရေမွှေးပေါက်စဘူး နှစ်ဘူး၊ လည်စည်းပဝါတစ်ခု အားလုံး ကျွန်မဟာတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကများတော့ တစ်ခုခု ပျောက်သွားရင် မသိသာလှဘူး။ ကျွန်မဆီမှာ လက်ဆောင်ရတဲ့ ပစ္စည်းက မနည်းဘူး။ ဒါတွေကို တစ်နေ့တစ်နေ့ ကဲ့ယူပြီး တစ်နှစ်တစ်ခါ ရွာပြန်ရင် ယူသွားကြမှာ။ "မြမူ အဲဒါတွေ အကုန်ထုတ်ခဲ့၊ ဒီမှာ နင်တို့ရဲ့ ခိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ နှစ်ယောက် တစ်ခန်းပေးထားတော့ အကြံတူချင်းပေါင်းမိတာပေါ့ ဟုတ်လား၊ မြဲမြဲမှတ်ထား၊ နင်တို့ ဒီလိုလုပ်နေသရွေ့ ဘဝက ခုလိုပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ၊ ခုဘဝမှာတောင် သူများအိမ်မှာ အိမ်ဖော် လုပ်ရတာ ဒီလို သူခိုး အလုပ်ပါလုပ်ရင် နောက် အိမ်ဖော်ဘဝတောင် ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ နင်တို့လေးယောက်လုံး တစ်ရွာတည်း၊ မြမူနဲ့ဟေမာက ငါ့အိမ်မှာ နေတာကြာပြီ။ ဘာပစ္စည်းမှ မပျောက်ဘူး၊ စိတ်ချရတယ်။ အခြေအနေချင်း မျဉ်းတစ်ကြောင်းပေါ် ရှိတဲ့ သူချင်းတူတာတောင် စိတ်ဓါတ်တွေ မတူလို့ ခုလိုဖြစ်တာ။ ရေသာခို၊ အချောင်နေချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲ။ ငါသိတာ ကြာပြီ၊ နင်တို့နှစ်ယောက်ကို အမိဖမ်းချင်လို့ပဲ၊ တစ်နပ်စားဥာဏ်တွေ" နှစ်ယောက်စလုံး မျက်ရည်တွေကျပြီး ဒူးထောက်တောင်းပန်ကြတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ မျက်ရည်ကျရုံမှတစ်ပါး ဘာမှမရှိတော့။ လူချင်းတူပြီး အသက်ရှူချင်းကွဲနေကြတဲ့ မျဉ်းတစ်ကြောင်းပေါ်က လူတွေ အခြေအနေ အဆင့်အတန်းတွေ ကွဲပြားသွားတာ ဒါကြောင့်ပဲ။ နောက်နေ့တော့ ဖေဖေ့နားမှာ နပ်(စ်)နဲ့ ဟေမာကို ထားခဲ့ပြီး ရုံးကို စိတ်ချလက်ချ သွားနိုင်တော့တယ်။ မနေ့က တစ်နေကုန်လုံးဖြစ်ရတဲ့ ဒေါသစိတ်တွေကြောင့် ညက အိပ်မရ သွေးတွေလည်း တိုးလို့။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ မနက် လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ နိုးထလာရတာ စိတ်ထဲအံ့သြမိတယ်။ ဖေဖေ့ကို ကိုယ်တိုင်အားဆေးတိုက်တော့ ဖေဖေက တစ်ခါမှ မသောက်ဖူး သောက်နေကျမဟုတ်တဲ့ ဆေးလုံးတွေကို တွေ့လိုက်ရသလို။ "သမီး ဒီဆေးအသစ်တွေ ဖေဖေက သောက်ရမှာလား" တဲ့ ကျွန်မ ခေါင်းညိတ်ပြတော့ ဖေဖေက မညည်းမညူ ဆေးတွေကို ယူပြီး သောက်ရှာတယ်။ ဖေဖေ့ကို သနားလွန်းလို့ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ဖေဖေရယ်လို့ စိတ်ထဲမှာပဲ ညည်းညူလိုက်မိတယ်။ ချောအိမာန် (မန္တလေး) Yati Magazine, July 2012
ကျေးဇူးရှင်ပေါ် သစ္စာ မစောင့်သိတာမျိုးဆိုတာ ဒါမျိုးကိုလည်း ခေါ်တာဖြစ်မယ်။ကိုယ့်အခြေအနေကို ဘ၀ကို မေ့ပြီး ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်တွေ ကင်းပျောက်၊ ကိုယ့်တဘို့တည်းကိုသာ ကြည့်တဲ့ နှစ်ယောက်.. အဆုံးသတ် မလှပါလား.. ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ ဆရာမရေ..ရေးတာလေး သဘောကျမိတယ်..ချစ်ခင်လျက်ဂျွန်မိုး
Being socially conscious, cem(mdy) has turned the spotlight on ever-growing and widespread problems that has long been prevalent amongst urbanised, well-to-do, foreign-connected (thus,asmall minority in the country) and the rural youths taking up 'ein bow' jobs (domestic workers) . While any unscrupulous act like petty theft is unjustifiable in any form of employment, these countryside kids should be in education, not in labour. Well, that is major social diseases (=chronic social failures of the country for decades) that directly involved other aspects like the-never-closing huge gap between the cities and the provinces,etc. August 17, 2012 at 5:17 AM